အမေရိကန်သံရုံးက ဒုတိယသုံးလပတ်တွင် ဈေးကွက်အားပြိုင်မှုစစ်တမ်းများ ထုတ်ပြန် - Pandaily
(Source: Caixin Global)
အမေရိကန်သံရုံးက ဒုတိယသုံးလပတ်တွင် ဈေးကွက်အားပြိုင်မှုစစ်တမ်းများ ထုတ်ပြန်
Aug 30, 2021, 21:35ညနေ 2021/08/31 06:03:31 Pandaily
တရုတ်နိုင်ငံမှ အစားအစာများ ပေးပို့သည့် ဧရာမအမေရိကန်မစ်ရှင်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒုတိယသုံးလပတ်တွင် ဘဏ္ဍာရေးစွမ်းဆောင်မှု စတင်မည်ဟု တနင်္လာနေ့က ကြေညာခဲ့သည်။ ပြည်နယ်ဈေးများကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က နေ့ချင်းပြီး ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်သံအဖွဲ့ကလည်း အဆိုပါကိစ္စအပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေပြီး ဥပဒေနှင့်အညီဝယ်ယူထားခြင်းမရှိကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှဈ ဇှနျလ ၃၀ ရကျနအေ့ထိ အမရေိကနျ ပွညျထောငျစုတှငျ မွနျမာကုနျသညျပေါငျး ၆၂၈၄ သနျးရှိပွီး နှဈစဉျ ရောငျးဝယျဖောကျကားသူ ၇၇၀ သနျးကြျောရှိကွောငျး သိရသညျ။ အစီရင်ခံစာအရ တရုတ်ကုမ္ပဏီများသည် မြို့ပေါင်း ၂၈၀၀ ကျော်နှင့် ရှန်ဟိုင်းတွင် လုပ်ငန်းဆောင် ရွက်နေသည်။
၂၀၂၁ ခုနှဈ ဒုတိယသုံးလပတျအတှငျး အမရေိကနျအစိုးရအဖှဲက ဆကျလကျအရှိနျအဟုနျပွငျးပွငျးနဲ့ တိုးတကျမှုကို ပွသခဲ့ပွီး ၂၀၂၀ ခုနှဈ အလားတူကာလကနေ ဝငျငှကေနေ ယှမျ ၂၄၇ ဒသမ ၇၇ ရာခိုငျနှုနျး (ယှမျ ၄၃၈ ဒသမ ၆၈ သနျး) အထိ တိုးတကျခဲ့ပါတယျ။ EBITDA နှင့် အသားတင်အရှုံးပေါ်မှုကို ထိန်းညှိပေးခြင်းဖြင့် အသားတင်အရှုံးပေါ်မှုကို ထိန်းညှိပေးခဲ့ရာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒုတိယသုံးလပတ်တွင် အနုတ်လက္ခဏာ ၁၂ ခုနှင့် အနုတ်လက္ခဏာ ၂၂ ဒသမ ၁၂ သန်း အသီးသီး ကျဆင်းခဲ့သည်။
“တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးဟာ တစ်ဖြည်းဖြည်း ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာနေပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်ငန်းကဏ္ဍအသီးသီးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်ရဲ့ ဒုတိယသုံးလပတ်မှာ ကျန်းမာရေးတိုးတက်မှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်. အမေရိကန်အဖွဲ့ရဲ့ တည်ထောင်သူ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Wang Xing က” မကြာသေးခင်က အားပြိုင်မှုအသစ်တွေကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို သတိပေးတဲ့အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို ပိုမိုဆန်းသစ်စေပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကို ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေ ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် “လို့ ပြောပါတယ်။
သို့သော် အမေရိကန်သံရုံးက ဧပြီလမှ စတင်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ “ကြီးမားသည့် လက်ဝါးကြီးအုပ်မှု” ကို တန်ပြန်ရန်အတွက် ဒဏ်ကြေးများ ပေးဆောင်ရန် တောင်းဆိုလာနိုင်ကြောင်း သတိပေးခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှဈ ဒုတိယသုံးလပတျကာလအတှငျးမှာ ကုမဏီတှအေနနေဲ့ စားသောကျကုနျပေးပို့မှုပမာဏ ၅၉.၅ ရာခိုငျနှုနျးကနေ ၁၇၃၆ သနျးအထိ မွငျ့တကျခဲ့ပါတယျ။ နောကျထပျမွငျတှနေ့ရေတာက နစေ့ဉျစားသောကျကုနျပို့ခပမာဏဟာ ၅၈.၉ ရာခိုငျနှုနျးအထိ မွငျ့တကျနပွေီး အရောငျးအဝယျကတော့ ၃.၈.၉ သနျးအထိရှိလာပါတယျ။
ကုန်သည်များဘက်မှ အမေရိကန်သံအ စည်းဖြင့် ‘Food Purche’ အစီအစဉ်အ သစ်ဖြင့် ဆက်လက်ရပ်တည်ရန် စီစဉ်ထားပြီး အရည်အသွေးမြင့် စားသောက်ဆိုင်နှင့် အသေးစားနှင့် အလတ်စား ကုန်သည်များ၊ အသေးစားနှင့် အလတ်စား ကုန်သည်များ အဆင်ပြေအောင် ကူညီရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း အွန်လိုင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
၂၀၂၁ ခုနှဈ ဒုတိယသုံးလပတျအတှငျး ဧရာမဟိုတယျနဲ့ ခရီးသှားကဏ်ဍရဲ့ ဝငျငှေ ယှမျ ၈၉.၃ သနျးကနေ ၈၆ သနျးအထိ မွငျ့တကျခဲ့ပါတယျ။ ဟိုတယျဘှတျကငျပွုလုပျရာမှာ အမရေိကနျသံရုံးရဲ့ ပွညျတှငျးဧညျ့ခနျးအရအေတှကျဟာ တဈညကို သိနျး ၁၄၀ ကြျောကနေ ၈၁ ရာခိုငျနှုနျးအထိ မွငျ့တကျခဲ့ပါတယျ။
Topics: မွငျကှငျးအမေရိကန်သံရုံးက တရုတ်အစိုးရကို ဖိအားပေးပြီး ရိက္ခာပို့ခိုင်းပြီး မြင်းစီးသမားကို လူမှုဖူလုံရေးပေးရတာကြောင့် ရှယ်ယာဈေးများ ထိုးကျခဲ့
ကုမ်ပဏီတှကေလညျး လုပျငနျးသဈတှေ ခြဲ့ထှငျပွီး အထူးသဖွငျ့ လကျလီလုပျငနျးတှမှော ရငျးနှီးမွှုပျနှံကွပါတယျ။ သညျအစီအစဉျသဈဟာ အခွားကဏ်ဍအလိုကျ ဝငျငှသေနျးပေါငျး ၁၁၃.၆ ရာခိုငျနှုနျးကနေ သနျး ၁၂၀ အထိတိုးတကျလာပွီး အဓိကအားဖွငျ့ လကျလီလုပျငနျးတှေ၊ B2B အစားအစာဖွနျ့ဖွူးရေးလုပျငနျး၊ စကျဘီးစီးလုပျငနျးနဲ့ Help Power Vehicle ဝနျဆောငျမှုတှေ တိုးတကျလာပါတယျ။
Tags ∗mobike | financial report | food delivery platform | Meituan*
အမေရိကန်သံအဖွဲ့အနေနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်မယ့် အစားအစာတွေကို စေလွှတ်ပြီး အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေကို လမ်းညွှန် အကြံဥာဏ်တွေ
တနင်ျလာနေ့ ညနပေိုငျးက ထုတျပွနျခဲ့တဲ့ သညျညှနျကွားခကျြကို ကွီးကွပျရေးဌာနက နလေ့ယျစာစားပွီးတိုငျး စလှေတျဖို့ တကျကွှလှုပျရှားသူတှကေ လမျးညှနျခကျြတဈရပျအနနေဲ့ တရုတျလူမြိုးတှကေို ကြှေးမှေး ပွီး ဧရာမအမရေိကနျအဖှဲ့ကွီးကလညျး ဘကျစုံသုတသေန လမျးညှနျခကျြတဈခုကို အကောငျအထညျဖျောမယျလို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။
Industry Jul 26 ဇူလိုငျ 27, 2021
အမေရိကန်သံရုံးက တရုတ်အစိုးရကို ဖိအားပေးပြီး ရိက္ခာပို့ခိုင်းပြီး မြင်းစီးသမားကို လူမှုဖူလုံရေးပေးရတာကြောင့် ရှယ်ယာဈေးများ ထိုးကျခဲ့
တရုတ်အမျိုးသားဈေးကွက်ကြီးကြပ်မှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ နှင့် အခြားအစိုးရဌာန ခုနစ်ခုတို့ ပူးတွဲ၍ ဇူလိုင် ၂၆ ရက်က ထုတ်ပြန်သော ‘ဥပဒေအခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့် ရှောက်ခြင်း’ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော် ပြထားသည်။
Industry Aug 20 ဩဂုတျ 20, 2021
တရုတ် အဓိက အင်တာနက် ကုမ္ပဏီ Q2 က ၂၀၂၁ အတွက် ကြော်ငြာဝင်ငွေ ဈေးကွက်ကောက်မည်
အစီရင်ခံစာအရ ကပ်ရောဂါဆိုးကျိုးများကို အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရန် အခြေခံထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ကြော်ငြာဈေးကွက်သည် လျင်မြန်စွာ ကျောချင်းကပ်လျက်ရှိသည်။
Industry Sep 02 စကျတငျဘာ 2, 2021
Meituan Q3 ၏ ဝငျငှေ သညျအမရေိကနျဒျေါလာ ၇. ၆ ဘီလီယံ ရှိသညျ။ နှဈစဉျ ကုနျသှယျမှု အသုံးပွုသူ ၆ ၆၇. ၅ သနျး
သောကွာ နတှေ့ငျ US Troupe သညျ ၂၀၂၁ ခုနှဈ၊ စကျတငျဘာ ၃၀ ရကျကုနျဆုံး သညျ့ ၂၀၂၁ ခုနှဈ ၏တတိယ သုံးလပတျ ဘဏ် financialာရေး အစီရငျခံစာကို ထုတျပွနျခဲ့သညျ။ ကုမ်ပဏီ၏ ၀ ငျငှေ သညျယှမျ ၄၈. ၈ ၂၉ ဘီလီယံ (အမရေိကနျဒျေါလာ ၇. ၆ ဘီလီယံ) သို့ရောကျရှိခဲ့ပွီး ပွီးခဲ့သညျ့နှဈ ကထကျ ၃၇. ၉% တိုးတကျခဲ့သညျ။